Bhimtatta (भिमदत्त) Movie Review
Topic: Bhimtatta (भिमदत्त) Movie Review
Author Topic: Bhimtatta (भिमदत्त) Movie Review (Read 2296 times)
« on: March 15, 2015, 12:27:50 AM »
Bhimtatta Movie Review
The movie was released on March 6, 2015 --> http://xnepali.net/movies/friday-release-bhhimdatta-zhigrana-and-punarjanma/
Film's profile here --> http://filmsofnepal.com/nepali-film-bhimdatta-2015/
- directed by Himgyap Lama
- presented by Nawal Khadka
- Bhimdatta is about the life of martyr Bhimdatta Panta
- Nawal Khadka (as Bhimdatta), Nisha Adhikari, Sumnima Ghimire
- script and screenplay - Shivam Adhikari
- there are some good performance, dialogues, and nice cinematography.
- good to gain knowledge about history and Bhimdatta.
- Notagood presentation.
- Song - melodious
- Choreography - appreciable
- Mani Thapa is good in story telling
- The script is bad
- action scenes too long and violent
- Good Dialogues
- Nawal Khadka looks good as Bhimdatta - good dialogue delivery
- Sumina Ghimireawife of Bhimdatta (Parbati) is very good. Her innocence, beauty, dialogue delivery is great. expression look real
- Nisha Adhikari looks good as Astha Singh
- Some supporting actors are really BAD ---
- First half builds expectation, curiosity and excitement
- When the four characters reach Dadeldhura to study about Bhimdatta, the movie starts losing its pace
- In second half movie focuses on the life of Bhimdatta and forgets about four characters
- The film makers have madeawrong assumption that "Bhimdatta’s story" will sell the movie.
Himgyap's comment when the movie fails to gain the audience says it all (attached)
director himgyap lama sad the film is not doing well in theater.jpg (113.97 kB, 508x572 - viewed 303 times.)
Re: Bhimtatta (भिमदत्त) Movie Review
« Reply #1 on: March 17, 2015, 03:59:31 AM »
टाउको काट्ने ‘भिमदत्त'
भिमदत्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा भएको कुरा उल्लेख छ। भारतसँगका असमानसन्धिका विरोध भएको कुरा पनि उल्लेख छ। तर, उनी सुदुरपश्चिम कमाण्डका आन्दोलनका नाइकेमात्र नभएर नेपाली कांग्रेसको सत्ता आएपछि ००७ सालमा सोही क्षेत्रका गभर्नर पनि भएका थिए भन्ने फिल्ममा कहिँ उल्लेख गरिएको छैन। गर्भनर पदमा रहँदै सरकारविरोधी आन्दोलनमा उनको सहभागीतालाई देखाउन सकिएको छैन। बस एक क्रान्तिकारीका रुपमा मात्र उभ्याइएको छ। भिमदत्त त्यतिमात्र थिएनन्।
प्रत्येक फिल्म निर्माणको काम अवधारणाले निर्धारण गर्दछ। अवधारणा बलियो बनाएपछि त्यसको प्रस्तुती र निर्माणको काम पनि बलियो हुनु अनिवार्य हुन्छ। शुक्रबारबाट व्यावसायीक रुपमा रिलिज गरिएको हिमग्याप लामा (टासी) निर्देशित फिल्म भिमदत्त हेर्नका लागि क्रान्तिकारी मनोभाव लिनु उपयुक्त हुन्छ। क्रान्तिका लागि उग्रहिंसात्मक मनस्थिति पनि प्रेरक जस्तो लाग्छ।
आधुनिक नेपालको भ्रष्ट राजनीति, अघिल्लो संविधानसभाको असफलतालाई छोएको फिल्म ‘भ्रष्टको टाउको काट्ने' कुराको उत्प्रेरणा जस्तै लाग्छ यद्यपि, कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने कुराको व्याख्यासहित फिल्मलाई टुंगो लगाइएको छ।
सुदूरपश्चिमाञ्चलका क्रान्तिनायक भिमदत्त पन्तको जीवनलाई उत्प्रेरणा बनाइएको फिल्मको मुख्य कथा उनकै जीवनकालको भोगाई छ। भिमदत्तको उदयदेखि हत्यासम्मको अवस्थालाई जोड्ने प्रयत्न गरिएको फिल्मका मुख्य अभिनेता नवल खड्का (भिमदत्त), सुमिना खड्का (पार्वतीदेवी, भिमदत्तकी श्रीमति), रमेश बुढाथोकी (विष्ट काजी) का प्रधान कथामा दौडिएको छ।
उनीहरुकै आदर्शमा आधुनिक राजनीतिक प्रणालीलाई फरक शैलीमा उठाइएको कथा उनिएको छ। भ्रष्टाचारमुक्त र किसान आन्दोलनको सन्देश प्रभाव फिल्मले जोडेको छ। कता कता फिल्म भिमदत्तको हत्याको बदलाजस्तो पनि लाग्छ। भिमदत्त ‘टाउको काट्ने' बदलाजस्तो पनि लाग्छ। भिमदत्तको जीवन र त्यसकै प्रभावमा (श्रीराम पुडासैनि, निशा अधिकार)लगायतले जोड्न खोजेको आजको राजनीति र उनीहरुको सम्झि‍एको भिमदत्त नै एक लाइनको कथा पनि हो।
श्रीरामको अभिनय राम्रो छ, निशाको औसत छ।
फिल्ममा उभ्याइएका कलाकारहरुको अभिनय औसत छ। उत्कृष्ट अभिनय रमेश बुढाथोकी (विष्ट काजी) को देखिएको छ। बाँकी सवै कलाकारको अभिनय औसत छ। कलाकारले अभिनयमा अन्याय गरेका छैनन्। समसामयिक राजनीतिलाई राम्रो बुझेका राजनीतिज्ञ तथा कथाकार मणि थापाको कथामा उनिएको भिमदत्त औसत राम्रो फिल्म हो।
फिल्मको प्राविधिक पक्ष कमजोरजस्तो लाग्छ। छायांकन उत्कृष्ट भन्न मिल्दैन। तर, पुरानो कथालाई उन्नुपर्ने बाध्यतामा बनाइएको सेट उपलव्ध प्रविधिका हिसावले राम्रो मान्नुपर्छ। फिल्ममा केही चिजलाई कलात्मक देखाउन सकिएको छैन। मास मिडियाको सवैभन्दा सरल माध्यम भएका कारणले फिल्मले त्यसका केही नियमहरु पालना गर्नुपर्दछ। हिंसालाई कलात्मक रुपमा देखाउन सकिएन भने त्यो भद्दा हुन्छ। टाउको काटेका दृश्यहरु अधिक भए तर त्यसको कलात्मक प्रस्तुतीमा ह्रासजस्तो देखियो।
तत्कालिन पश्चिमा शैलीको संवादलाई उतारेर फिल्म कलात्मक बनाउने प्रयास राम्रो भएको छ। तर, संवादका क्रममा भाषाको प्रयोग चुकेका कयन ठाउँहरु छन्। फिल्ममा हिन्दि भाषाको प्रयोग सर्वसाधारण गाउँलेका लागि भिमदत्तले प्रयोग गरेका छन्। त्यसलाई तत्कालिन पश्चिमा शैलीमा कलात्मक प्रस्तुतीमा ढाल्दा राम्रो हुने थियो। भ्रष्टाचार र किसान आन्दोलनको छायाँका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषय सन्दर्भ उत्कृष्ट छ, निर्माणको पक्षमा केही ह्रास देखिएको छ। यी केही कमजोरीबाहेक भिमदत्तकै जीवनका केही विषयलाई छुटाइएको अनुभुत हुन्छ।
भिमदत्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा भएको कुरा उल्लेख छ। भारतसँगका असमानसन्धिका विरोध भएको कुरा पनि उल्लेख छ। तर, उनी सुदुरपश्चिम कमाण्डका आन्दोलनका नाइकेमात्र नभएर नेपाली कांग्रेसको सत्ता आएपछि ००७ सालमा सोही क्षेत्रका गभर्नर पनि भएका थिए भन्ने फिल्ममा कहिँ उल्लेख गरिएको छैन। गर्भनर पदमा रहँदै सरकारविरोधी आन्दोलनमा उनको सहभागीतालाई देखाउन सकिएको छैन। बस एक क्रान्तिकारीका रुपमा मात्र उभ्याइएको छ। भिमदत्त त्यतिमात्र थिएनन्। कथाकारले उक्त कुरालाई उल्लेख नगरेको हो या निर्देशकले त्यसकुराको नजरअन्दाज गर्न हुने थिएन। फिल्ममा भिमदत्तको जीवनलाई संस्मरणका रुपमा उभ्याउन खोजिएको थियो। उनी भारत गएको र भारतबाट फर्किनुको कारणलाई प्रष्टसँग उल्लेख गर्न नसक्नु फिल्मको कमजोरी हो।
निर्देशक लामाको यो पहिलो फिल्म रहेको र गम्भीर र गहिरो विषयमा बनेका कारण भएका केही कमजोरीहरुप्रति त्यति टिप्पणी उठाउन अनिवार्य छैन। तर, निर्देशन एउटा जागिर नभएर एउटा उज्जवल भविष्यको सीप भएका कारण सकभर त्रुटिहिन काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। भिमदत्तमा लामाले धेरै सीपको प्रयोग गरिरहँदा कतिपय ठाउँमा चुकेको भान हुन्छ।
फिल्मका सटहरु जोड्नेक्रममा कहिलेकाँही हतारमा फ्ल्यास ब्याकमा लगिँदा बुझ्न अलिकति असहज पनि हुन्छ, यस्ता कमजोरी निर्देशकले छाड्नु हुँदैन। नृत्य निर्देशनबाट फिल्म निर्देशनको यात्रामा लागेका लामाको काम पूर्ण रुपमा खोट लगाउने छैन। तर, निर्देशनमा हृदय र काममा दिमाग भयो भने एउटा राम्रो फिल्मको उत्पादन र प्रदर्शन सरल र सहज पक्कै हुन्छ। दर्शक राम्रो उत्पादनकै पर्खाइमा निरन्तर सिनेमा हल पुगिरहेको हुन्छ, निर्देशकले मनमा यो कुरालाई मनन् गर्नैपर्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २५, २०७१ १६:०६:०८
« Reply #2 on: March 18, 2015, 06:57:15 AM »
'भीमदत्त' ७५ माथिकालाई निःशुल्क
पहिलो किसान आन्दोलनका सहिद भीमदत्त पन्तको जीवनमा बनेको फिल्म 'भीमदत्त' आगामी शुक्रबार देशभर रिलिज हुने भएको छ। काठमाडौंको युनियन हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मका निर्माता तथा अभिनेता नवल खड्काले सबैले हेर्नलायक फिल्म भएकाले ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई फिल्म निःशुल्क देखाउने घोषणा गरे।
कार्यक्रममा पत्रकारद्वय प्रदीप भट्टराई, विजयरत्न तुलाधर तथा फिल्म वितरक प्रदीप उदयले संयुक्त रुपमा फिल्मको नयाँ पोस्टर अनावरण गरे। ऐतिहासिक विषयमाथि फिल्म बनाएकोले यसमा आफूले सक्दो मिहिनेत गरेको बताउँदै फिल्म निर्देशक हिमग्याल लामा टासीले आफ्नो फिल्म औँलामा गन्न सकिने राम्रा फिल्मको सूचीमा पर्ने दाबी गरे।
'यो फिल्म चलेन भने मैले कि त पेशा परिवर्तन गर्छु कि त अझै राम्रो बु‰न बाँकी रहेछ भनेर फिल्म पढ्न जान्छु,' लामाले भने, 'यो फिल्मको प्रदर्शनपछि फिल्मउद्योगमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुने आशा गरेको छु।'